Muxuu Sergio Aguero ka yiri kaddib markii ay Man City si rasmi ah ugu dhawaaqday inuu ka tagayo kooxda? – Gool FM
(Manchester) 29 Maarso 2021. Xiddiga reer Argentina ee Sergio Aguero ayaa kaga hadlay bartiisa Twitter-ka kaddib markii ay ay kooxda Manchester City ku dhawaaqday inuu ka tagayo garoonka Etihad.
Aguero ayaa ku dhawaad ​​10 sano ku qaatay kooxda Manchester City tan iyo markii uu kaga soo biiray naadiga reer Spain ee Atletico Madrid sanadkii 2011.
Manchester City ayaa maanta oo Isniin ah si rasmi ah u shaacisay in xiddigooda reer Argantina ee Sergio Aguero uu ka tagayo safka Kooxda dhamaadka xilli ciyaareedka haatan socda.
Shabakada BBC-da ayaa shaacisay in Qandaraaska Sergio Aguero ee Manchester City uu dhacayo dhamaadka xiliciyaareed kaan, halka kooxda ay u sheegtay inaysan doonaynin inay qandaraaska u cusbooneysiiso.
Haddaba Sergio Aguero ayaa ka hadlay dareenkiisa kaddib markii ay kooxda si rasmi ah ugu dhawaaqday bixitaankiisa, wuxuuna yiri:
“Toban sano oo guulo waa weyn ah, inta lagu guda jiray waxaan awooday inaan noqdo gooldhaliyaha taariikhiga ah, iyo inaan sameeyo xiriir aan jebi karin dhamaan kuwa jecel kooxdan, dadka waligood ku sii jiri doona qalbigayga.”
“Waxaan ku soo biiray kooxda inta lagu gudajiray wajigii dib u dhiska sanadkii 2011, iyadoo ay jirtay awaamiirta milkiilayaasha iyo caawinaada ciyaartoy badan, waxaan u qalnay boos ka mid ah kuwa ugu waa weyn adduunka, in la ilaaliyo booskaas waxay ku sii jiri doontaa garbaha kuwa kale,”
“Aniga ahaan, waan sii wadi doonaa inaan bixiyo inta ugu badan inta ka hartay xilli ciyaareedka si aan ugu guuleysto koobab badan uguna keeno farxad badan taageerayaasha.”
“Kaddib waxaa bilaabmi doono waji cusub iyo loolan cusub, waxaana si buuxda diyaar ugu ahay inaan ku wajaho isla dareenka iyo farxada aan heystay si aan ugu sii wado tartamada heerka ugu sarreeya.”
Koox ka dhisan England oo mar kale hoggaanka u qabatay loollanka loogu jiro saxiixa Koulibaly